शासन कानूनको कि शासकको ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण शासन कानूनको कि शासकको ?
on: २४ भाद्र २०७५, आईतवार ०७:०८ लेख | दृष्टिकोण
शासन कानूनको कि शासकको ?
असार २३ गते क्यानडाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन विमानस्थल पुगेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई उड्ने बेलामा प्रहरी नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री निवास पुर्‍याएर विमान उडेपछि छाडियो । असार २५ गते वीर अस्पतालका चिकित्सक भोजराज अधिकारीलाई गृहमन्त्रीका निजी सचिव सूर्य सुवेदीले बलजफ्ती मोटरमा राखेर गृह मन्त्रालय पुर्‍याएर धम्क्याउने र तर्साउने गरेर छाडियो । भदौ ८ गते माओवादी पूर्वलडाकू लेनिन विष्टलाई बैङ्ककका लागि प्रस्थान अनुमति दिइसकेपछि विमानस्थल अध्यागमनले एउटा पत्र थमाएर प्रस्थान गर्न दिएन ।
सवा ३ करोडमा एक दुई जनामाथि भएका यस्ता घटना हेर्दा सामान्य देखिए पनि अन्तर्वस्तु असामान्य छ । सरकार नागरिकको संरक्षक हो, विश्वासको अन्तिम केन्द्र हो । नागरिकद्वारा हदैसम्मको बलप्रयोग गर्न अधिकृत सर्वशक्तिमान् सरकारले विनाकारण बारम्बार साधारण नागरिकको अधिकार सङ्कुचन गर्न लागेको छ । शक्ति हामीसँग छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान सरकारले देखाएको छ । के यी घटनाले हामीले अभ्यास गर्न खोजेको कानूनी राज्यसँग तादात्म्य राख्छन् ?
आधुनिक राज्यको दर्शन प्रदान गर्ने थोमस हबले सन् १६४० मा राज्यशक्ति सदैव हस्तक्षेपकारी हुने बताउँदै राज्यले तोकिएकोबाहेक अन्य कार्य गर्नै नहुने तर्क गरेका थिए । राज्यको सीमाबाहिरको क्षेत्र जहिले पनि स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भनेका थिए । कानूनी राज्यको अवधारणाको आधार यही हो ।
कानूनी राज्यमा दुई तत्त्व महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो राज्यले गर्ने सबै काम कानूनबमोजिम मात्र हुनुपर्छ भन्ने हो भने अर्कोचाहिँ शासक आफै पनि कानूनभन्दा माथि नहुने हो । सरकारले कानूनको कार्यान्वयन गर्छ गर्दैन ? भनी निगरानी गर्न स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था पनि कानूनी राज्यको अभिन्न अङ्ग हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा कानूनी राज्यका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपलिकाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । प्रस्तावनाको भावनाअनुसार नै नेपालको संविधानको रचना गरेर कानूनी राज्यलाई शासनको आधार बनाइएको छ ।
कानूनी राज्य संविधानमा लेखेर वा राजनीतिज्ञले बोलेर मात्र स्थापित हुँदैन । कानूनी राज्यका मान्यतालाई मन, वचन र कर्मले पालना गर्नुपर्छ । कानूनी राज्यको प्रमुख मान्यता कानूनमा उल्लेख भएको सीमाभित्र मात्र सरकार चल्नुपर्छ भन्ने हो । कानूनमा उल्लेख भएबाहेकको सबै क्षेत्र नागरिक स्वतन्त्रताको क्षेत्र हो । सरकार कानूनभन्दा बाहिर जानेबित्तिकै नागरिक स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण हुन जान्छ । चिकित्सक अधिकारीलाई बलजफ्ती प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हप्कीदप्की गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई नेपालको कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । यदि थियो भने निजको व्यवहारलाई अपराधीकरण गरिन्थ्यो । अपराधीकरण नगर्नुको अर्थ शक्ति हामीसँग छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौं भनेर प्रदर्शन गरिएको हो । यस्तो व्यवहारले नागरिकमा सरकारप्रति भरोसाभन्दा संशय सृजना गर्छ ।
कानून व्यवहार नियमनका लागि निर्माण गरिएको कार्यान्वयनयोग्य औजार हो । सरकारले कानूनभन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि अपराध गरिस् भन्न मिल्दैन । नैतिकता र असल कामको बहानामा सरकारले कानूनबाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन ।
कानून साधारण विवेकभन्दा बढी केही होइन । सबैले विवेक देखाउने हो भने समाज स्वतः अपराधविहीन हुन्छ । यस्तो नहुने भएकाले नै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । त्यसकारण कानून कार्यान्वयन सबैको विवेकले ठीक देख्ने हुनुपर्छ । विषयवस्तु समाजको अपेक्षाअनुरूप हुनुपर्छ । समाजको अपेक्षाअनुरूप भएन भने अपराध गर्ने बढी हुन्छन् र यो कार्यान्वयनयोग्य नै हुँदैन । पूर्वाग्रह राखेर लक्षित कारबाही गर्न सरकारलाई सजिलो मात्र हुन्छ । सम्पत्तिको अभिलेखन व्यवस्था कमजोर रहेको नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन अकुत सम्पतिको व्यवस्था, राजनीतिक र व्यक्तिगत शत्रु साधनाको औजार बनेको छ ।
कतिपय राजनीतिज्ञ आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन वा कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर समाजको अपेक्षाभन्दा बढीको कानून बनाउँछन् । उनीहरूमा कानून भनेको मैले पालना गर्नुपर्ने विषय होइन, यो सामान्य मानिसको विषय हो भन्ने घमण्डले वास गरेको हुन्छ ।
कानून बनाउने डाडुपन्यू चलाउने राजनीतिक वा प्रशासनिक अधिकारीले कानून बनाउने बेलामा आफ्नो हितमा असर पर्न दिँदैनन् । निजामती सेवा ऐनमा बाहिरका उत्कृष्टलाई सेवामा प्रवेश गराउन राखिएको छड्के प्रवेशको व्यवस्थालाई पाठ्यक्रम बनाउने कर्मचारीले अपहरण गरेर आफूबाहेक कोही आउन नसक्ने बनाए ।
अन्तिम रक्षक अदालतको निर्णय मानिसको सामान्य विवेकभन्दा फरक पर्न थाल्यो भने कानून कार्यान्वयन अपेक्षाविपरीत हुन जान्छ । यस्तो घटना दोहोरिइरह्यो भने कानूनमाथिको विश्वास हराएर जान्छ । शासकले व्यक्तिगत, राजनीतिक वा अन्य स्वार्थका लागि कानून कार्यान्वयनलाई उपयोग गर्न थाल्यो भने अन्यायका शृङ्खला उत्पन्न हुन्छन् । सरकारको गतिविधि अन्यायपूर्ण भयो भने शासनको वैधानिकता खिइन्छ । प्रजातन्त्रमा सरकारको वैधानिकता गणितमा मात्र सीमित हुँदैन ।
कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अदालतले प्रभाव वा दबाबमा परेर जथाभावी निर्णय गरे भने कानून न त समाजको अपेक्षाअनुरूप हुन्छ न त यो भविष्यवाणी गर्नयोग्य हुन्छ । अदालतले यसरी गर्ने निर्णयले तर्कयुक्त व्यक्तिको व्यवहार नियमन गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन । नागरिकले आर्थिकलगायत कुनै पनि काम गर्न डराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण विश्व बैङ्क आदिले आर्थिक विकासका लागि भविष्यवाणीयोग्य कानूनी राज्यलाई असाध्यै महŒव दिएका छन् । वैधानिक गतिविधिमा जोखीम बढी भयो भने मानिस अवैध गतिविधि लाग्छन् ।
कानून न्यायकै लागि हो । मानिस अन्याय सहन सक्दैन । आफ्नो मात्र होइन, अरू माथिको अन्याय पनि सहँदैन । अन्यायले सीमा नाघेपछि समाज नै प्रतिरोधमा उत्रन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारको घटनामा देशै जुर्मुराउनुको करण अन्यायले पराकाष्ठा नाघेर हो ।
शासन गर्नेहरू आवेशमा होइन, तर्कको आधारमा मात्र चल्नुपर्छ । शक्ति प्रयोगले व्यापक संयमको माग गर्छ । अध्यागमनबाट प्रस्थान अनुमति पाएका उपकुलपतिलाई नियन्त्रणमा लिएर वा विष्टलाई बनावटी बहाना बनाएर विदेश जानबाट रोक्ने कामले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । कोइराला र विष्टले नेपालको कानूनअनुसार अपराध गरेका थिए भने कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्थ्यो । सरकारले कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको छैन । कानूनविपरीत शक्ति देखाउनु कानूनी राज्यको अवधारणाविपरीत हुन्छ ।
कानूनी राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष समानता हो । कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन । शासक र नागरिक सबैका लागि कानूनबराबर हुन्छ । कानूनी राज्यले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन अस्वीकार गर्छ । दायरा कानूनी राज्यको अर्को पक्ष हो । कानून सर्वभौम राष्ट्रको सबै भाग र नागरिकमा उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्छ । कानून निरपेक्ष रूपमा प्रभावी भएन भने विभेद हुन्छ र समानताको आधारभूत तत्त्व नै रहँदैन ।
सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न पाउने अधिकार पनि कानूनी राज्यमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उपचारको व्यवस्थामात्र पर्याप्त हुँदैन, यो प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ । यसका लागि अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । उपचार सस्तो र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । कानूनमा थाहा छैन भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन । त्यसकारण कानून निर्माणमा पर्याप्त छलफल र बनेका कानून बारेमा पनि सबैलाई यथोचित जानकारी आवश्यक हुन्छ । कानूनी राज्यका यी आधारभूत कुराप्रति सरकारले ध्यान दिएन र नागरिकका अधिकार हनन भयो भने राज्य संरक्षकभन्दा थोमस हवले भनेजस्तो लेभियाथन वा राक्षसजस्तो हुन जान्छ ।